Ngwaọrụ kachasị mma iji mee ka TV ghọọ Smart TV | Akụkọ akụrụngwa
Ngwaọrụ kachasị mma iji gbanwee TV gị ka ọ bụrụ Smart TV
Nkà na ụzụ enwewo ọganihu nke ukwuu n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ma ọ bụrụ na ọ gwaghị anyị niile ndị amụrụ site n'agbata afọ 70 na 80. Ugbu a ọtụtụ, ọ bụrụ na ọ bụghị telivishọn niile ha na-ere nwere ọgụgụ isi, ma nọrọ n'okpuru aha Smart TV. Gbaso nzọụkwụ ole na ole anyị nwere ike gbanwee igwe onyonyo anyị bụ Smart TV.
Typedị telivishọn a na-enye anyị ozi ozigbo banyere mmemme a na-agbasa na telivishọn ugbu a, nke na-egbochi anyị ịnweta teletext a ma ama ma ọ bụ jiri ngwa maka ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba. Ọ na-enyekwa anyị ịnweta ọdịnaya na-adịghị agwụ agwụ na-enweghị ịkwaga site na sofa, dị ka Netflix, HBO na vidiyo ndị ọzọ na-achọ ọrụ.
Mana, dabere na ụdị Smart TV, anyị nwekwara ike igosi ọdịnaya nke ama ma ọ bụ mbadamba anyị na telivishọn, nke dị mma maka mgbe anyị chọrọ igwu vidiyo anyị chebere na ngwaọrụ anyị, gosi foto nke njem ikpeazụ, Gaa na Internetntanetị ma kpọọ ọdịnaya ...
Mana ọ bụghị mmadụ niile dị njikere imegharị telivishọn ha maka nke ọhụrụ, ebe ọ bụ na nke ha nwere ugbu a na-arụ ọrụ zuru oke ma n'oge a egosighi ike ọgwụgwụ. N’isiokwu a anyị ga-egosi gị nhọrọ dị iche iche iji gbanwee TV ochie anyị ka ọ bụrụ TV dị mma nke ahụ na-eme ka anyị nwee ike irite uru ndị a na-enweta n'ụdị ihe onyonyo a.
1 Ihe dị mkpa: njikọ HDMI
2 Uru nke Smart TV
3 Kedu nhọrọ ndị dị na ahịa?
3.2 Chromecast 2 na Chromecast Ultra
3.3 Igbe Xiaomi Mi TV
3.4 Ndị ọzọ set-top igbe
3.5 HDMI mkpisi
3.6 Jikọọ otu njikwa
3.6.1 Egwuregwu 4
3.7 Onye ọkpụkpọ Blu-ray
3.8 Jikọọ kọmputa
3.8.1 PC ma ọ bụ Mac
3.8.2 Ntu Pi
3.9 MHL dakọtara na ekwentị mkpanaaka
Ihe dị mkpa: njikọ HDMI
HDMI Gịnị ekwe anyị na-ebunye ma onyonyo ma ụda n'otu eririN'ihi ya, ọ ghọwo njikọ a na-ejikarị eme ihe na telivishọn nke oge a, na-ahapụ eriri RCA na scart / scart, nke ọ bụghị nanị weghara ọtụtụ ohere, kamakwa ọ na-ejedebe oke ogo nke oyiyi na ụda.
Iji gbanwee TV ochie gị ka ọ bụrụ nke dị mma, ịchọrọ ihe nkwụnye ọkụ nke na-agbanwe mgbaàmà site na RCA ma ọ bụ wepụ na HDMI. Na Amazon anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ nke ụdị a. Nke a bụ njikọ ndị na-enye anyị ogo kacha mma / ọnụahịa.
Uru nke Smart TV
Mana ụdị TV a ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere ịnweta ọnụọgụ nke ọdịnaya dị n'ụdị ihe nkiri na usoro, kamakwa na-enye anyị ohere ịbanye na YouTube ebe anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke vidiyo na isiokwu ọ bụla. Ọ na-enye anyị ọrụ ozi gbasara ihu igwe, ịnweta map Google, ọwa eserese maka ụmụntakịrị, ọwa esi nri, akụkọ ndụ ...
Na mgbakwunye, dabere n'ụdị telivishọn, anyị nwekwara ike iji ya mee oku vidiyo site na Skype, doro anya na ụdị nke jikọtara igwefoto, zuru oke maka ịkpọ oku vidiyo na ndị ọzọ so n'ezinụlọ. Anyị nwekwara ike iji ya gee ntị na katalọgụ Spotify sara mbara, nhọrọ dị oke egwu ma ọ bụrụ na anyị nwere telivishọn anyị na stereo.
Kedu nhọrọ ndị dị na ahịa?
N'ahịa anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhọrọ ndị na-enye gị ohere ịmegharị telivishọn ochie anyị ka ọ bụrụ igwe onyonyo smart. N'ime ihe omumu a, tAnyị nwekwara ike ịchọta mgba ndị a na-ahụkarị na Google na Apple, ebe ọ bụ na ịdabere na gburugburu ebe obibi ị na-emebu, ọ ga-abụ na ị ga-eji otu ma ọ bụ nke ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, iPhone, iPad ma ọ bụ ngwaọrụ Apple ọ bụla, nhọrọ kachasị mma ị ga-ahụ n'ahịa bụ Apple TV, ebe ọ na-enye anyị ohere ọ bụghị naanị izipu ọdịnaya nke Mac ma ọ bụ ngwaọrụ iOS anyị na TV , kamakwa Ọzọkwa, mwekota n'ime usoro okike zuru ezu. Ọzọkwa na mwepụta nke ọgbọ nke anọ Apple TV, Apple gbakwunyere ụlọ ahịa ngwa nke ya, ka anyị wee nwee ike ime jiri Apple TV dị ka a ga - asị na ọ bụ ebe egwuregwu.
N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa dị na ụlọ ahịa Apple TV, anyị nwere ike iji ngwa dịka Plex, VLC or Infuse to kpọọ fim ma ọ bụ usoro anyị dowere na kọmputa anyịMa obu Mac ma obu PC. Ọ na - enye anyị ohere ịnweta ọdịnaya niile dị na iTunes, iji nwee ike ịgbazite ma ọ bụ zụta ihe nkiri Apple na-enye anyị site na ọrụ a.
Netflix, HBO, YouTube na ndị ọzọ dịkwa maka Apple TV yana ngwa ndị ọzọ nke ụdị a iji nwee ike na-eri ụdị ọdịnaya ọ bụla na-ahapụghị ụlọ anyị, oge na ebe anyị chọrọ. Ihe ndi ozo anyi gosiputara gi n’isiokwu a, adighi nma na usoro okike Apple, obu ezie n’itinye ihe di egwu, anyi g’eme ka mmekota ahu karie.
Zụta Apple TV
Chromecast 2 na Chromecast Ultra
Google sonyeere ụdị maka ụdị ngwaọrụ a na nso nso a, ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere Apple TV, ngwaọrụ nke kụrụ ahịa na ọgbọ mbụ ya na 2007. Chromecast bụ ngwaọrụ Google rụpụtara nke na-enye gị ohere igwu egwu site na gụgharia site na ama gị na telivishọn. Ọ dakọtara na iOS, gam akporo, Windows na okike macOS site na iji ihe nchọgharị Chrome. Ọdịnaya enwere ike izipu na Chromecast Ọ nwere oke na ngwa akwadoro na ihe nchọgharị Chrome.
Chromecast ahụ Ọ nwere ọnụahịa nke euro 39, chọrọ microUSB ike ọkọnọ ma dị mfe ịhazi. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ ụdị 4k, Ultra, ọnụahịa ya na-agbanye 79 euro.
Zụta Chromecast 2 / Zụta Chromecast Ultra
Igbe Xiaomi Mi TV
Firmlọ ọrụ China ahụ chọkwara ịbanye n'ụzọ zuru ezu na ọdịnaya ọdịnaya nke anyị nwere ike iri site na telivishọn anyị ma nye anyị Xiaomi Mi TV Box, ngwaọrụ jikwaa na gam akporo TV 6,0, sistemụ arụmọrụ nke ọtụtụ Smart TV na-enye anyị taa. N'ime anyị na-ahụ 2 GB nke RAM, 8 GB nke ebe nchekwa dị n'ime, ọdụ USB iji jikọọ draịvụ ike ma ọ bụ osisi USB. Ngwaọrụ a nwere ike ịme ọdịnaya na 4k na 60 fps na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Ndị ọzọ set-top igbe
N'ahịa anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ ndị na-enye anyị ohere ịnweta Internetntanetị, ngwaọrụ ndị ejiri ụdị nke gam akporo jikọtara na telivishọn, dị ka Nexus Player nyere anyị, na-echekwa ebe dị anya. Ngwaọrụ nke ụdị a dị na ọnụahịa na nkọwa niile, mana ị ga-eburu n'uche nke ahụ ike dị ike playback, ọ ga-eji ire ụtọ dị ka nke ọma dị ka ngwa ngwa, tumadi mgbe anyi choro igwu faịlụ na mkv usoro dika imaatu.
Banyere ngwa ndị anyị nwere ike iwunye, na-eburu n'uche na ọ bụ gam akporo, nwee uzo Google Play StoreYa mere, anyị nwere ike iwunye Netflix, YouTube, Plex, VLC, ngwa Spotify yana ngwa dị iche iche ndị ọrụ na-enye anyị iji rie ọdịnaya site na smartphone ma ọ bụ mbadamba.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na Chromecast nke Google ka bụ mkpisi, ekpebiri m ikewapụ ya na nkewa a dịka ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ na-enye mma kacha mma maka ego na ahịa, na mgbakwunye na ịnwe ya na otu n'ime ewu ewu. . Ma ọ bụghị naanị ya dị. N'ahịa anyị nwere ike chọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị ụdị ụdị a dị iche iche Mana m ga-elekwasị anya n'igosi gị nhọrọ ndị na-enye uru kachasị mma maka nkwa ego.
Ekele maka kọmputa a ejikọtara na ọdụ ụgbọ mmiri HDMI, anyị nwere ike iji Windows 10 na TV anyị, dị ka a ga - asị na anyị ejikọtara PC na ya. N'ime anyị na-ahụ Intel Atom processor na 2 GB nke Ram na 32 GB nke nchekwa. Na-ejikọ onye na-agụ ihe nchekwa, 2 ọdụ ụgbọ USB a na-eme ngwa ahụ site na ọdụ ụgbọ mmiri microUSB. O doro anya na ọ nwekwara njikọ Wi-Fi iji jikọọ na Internetntanetị ma nweta ọdịnaya anyị chọrọ n'oge niile.
Zụrụ ugbu a Intel ® Compute Stick - Kọmputa Kọmputa
Firmlọ ọrụ Taiwanese na-enyekwa anyị n'ahịa kọmputa kọmputa nke jikọtara n'ọdụ ụgbọ mmiri HDMI anyị. Ọ nwere nsụgharị abụọ, otu nwere Windows 10 na nke ọzọ na ChromeOS. Njirimara ya yiri nke achọtara na Intel Compute Stick, ya na Atom processor, 2 GB nke Ram, Njikọta WiFi, ọdụ ụgbọ USB 2, onye na-agụ kaadi na 32 GB nke nchekwa dị n'ime.
Zụrụ ugbu a Asus Chromebit-B014C ya na ChromeOS
Zụrụ ugbu a ASUS TS10-B003D ya na Windows 10
Nke a bụ otu n'ime osisi dị ọnụ ala anyị nwere ike ịchọta n'ahịa ma nke ahụ na-enye anyị nnabata ka ukwuu na ọtụtụ usoro okike, ebe ọ bụ na ọ kwekọrọ na usoro Miracast, AirPlay na DLNA yana Windows, Linux, iOS na gam akporo.
Zụrụ ugbu a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
Jikọọ otu njikwa
Ruo oge ụfọdụ, consoles abụrụla naanị ngwá ọrụ iji egwu egwuregwu, kamakwa nye anyị njikọ gị na .ntanetị iji lelee vidiyo YouTube, nwee ọ enjoyụ na Netflix, lelee ọdịnaya echekwara na PC ma ọ bụ Mac na Plex ...
Sony PlayStation bụ otu n'ime ọtụtụ ebe etiti ọtụtụ multimedia anyị nwere ike ịchọta na ahịa. Ọbụghị naanị na ọ na-enye anyị otu njikọta dị ka Smart TV, kamakwa Ọ bụkwa a Blu-Ray ọkpụkpọ, ọ nwere ngwa Netflix iji rie ọdịnaya site na ikpo okwu ya, Spotify, Plex, YouTube wee si otu narị otu ngwa bara ezigbo uru.
Isi ihe dị iche anyị na-ahụ na PlayStation bụ na Xbox One anaghị enye anyị ọkpụkpọ Blu-Ray, nke na-etinye ya n'ọnọdụ dị ala na nke a naanị, ebe ọ na-enyekwa anyị ohere ịnụ ụtọ Netflix, Plex, Spotify, Twitch, Skype Ọzọkwa ekele Windows 10 anyị nwere ike tinye onu ogugu nke ngwa nile ugbu a na Storelọ Ahịa Windows.
Onye ọkpụkpọ Blu-ray
Ndị ọkpụkpọ Blu-Ray nke oge a, dabere na onye nrụpụta, na-enye anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ngbako a nke anyi puru ichota na consoles nke oge a nke m kwuru n'elu, belụsọ enwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu. Typedị ọkpụkpọ a na-enye anyị ọtụtụ ngwa dị iche iche nke anyị nwere ike ịnweta YouTube, Netflix, Spotify ...
Otu n'ime ihe ngwọta dị ọnụ ala na anyị nwere ike ịchọta n'ahịa bụ ohere nke ijikọ kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ na telivishọn anyị. Dabere na afọ ole ọ dị, o yikarịrị ka anyị achọghị ịzụta ihe nkwụnye HDMI maka telivishọn, ebe ọ bụ na site na ọdụ ụgbọ VGA na arụmọrụ nke kọmputa anyị nwere ike ijikọ ya na eriri na telivishọn na-enweghị HDMI.
PC ma ọ bụ Mac
Ruo oge ụfọdụ, anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke kọmputa, obere kọmputa ndị na-enye anyị ohere ijikọ ọnụ na ọdụ HDMI nke telivishọn anyị na nke anyị nwere ike ịnweta ọdịnaya Internetntanetị. dị ka ọ bụrụ na anyị na-eme ya na kọmputa anyị, kiiboodu na oke.
Smart TV abụghị naanị igwe onyonyo nwere ọdịnaya nke dị na mpụga ya, ma na ịntanetị ma ọ bụ na kọmputa ma ọ bụ na mkpisi USB ma ọ bụ kaadị ebe nchekwa. Utu Pi na-enye anyị ihe ngwọta dị mma maka ụdị ikpe ndị a,, ebe ọ bụ na ịgbakwunye otu modul Wifi anyị nwere ike ịnweta ọdịnaya ọ bụla dị na ntanetị anyị na mpụga ya.
MHL dakọtara na ekwentị mkpanaaka
Ọ bụrụ na anyị nwere ama dakọtara na OTG na drọwa, anyị nwere ike jiri ya dị ka ebe mgbasa ozi ijikọ ya na HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri nke telivishọn anyị ma gosipụta ọdịnaya niile nke ihuenyo na telivishọn.
N'isiokwu a, anyị egosila gị nhọrọ niile dị iche iche anyị nwere ike ịchọta n'ahịa iji gbanwee telivishọn ochie anyị, ọbụlagodi na ọ bụ ọkpọkọ, gaa na TV mara mma. Ugbu a ha niile dabere na mmefu ego ị na-eme atụmatụ imefu. Mostzọ kachasị akụ na ụba bụ site na ijikọ kọmputa ochie na telivishọn, mana ọrụ dị ga-ejedebe site na akụrụngwa.
Ọ bụrụ n'ezie na anyị chọrọ ndakọrịta na ntụgharị, nhọrọ kachasị mma bụ igbe setịpụrụ nke Android ma ọ bụ HDMI Stick jikwaa Windows 10, ebe ọ bụ na ha anaghị ekwe ka ị bugharịa ya ebe ọ bụla ma jiri ha mee ihe dị ka a ga - asị na ọ bụ kọmputa, opekata mpe na ikpe nke osisi na Windows 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwaọrụ kachasị mma iji gbanwee TV gị ka ọ bụrụ Smart TV
Nke a bụ Microsoft Surface Mini nke erughị ahịa ahụ